Swansea တက္ကသိုလ်၏သုတေသနပြုချက်အရအင်တာနက်အလွန်အကျွံအသုံးပြုခြင်းသည်လူများဖျားနာခြင်းကိုပိုမိုဖြစ်ပေါ်နိုင်သည် (2015) - Your Brain On Porn
ဆွမ်ဆီးတက္ကသိုလ်သုတေသနအင်တာနက်ကိုအသုံးပြုပြီးလူတွေကအလွန်အကျွံ (2015) နာမကျန်းပိုမိုဖြစ်ပေါ်နိုင်ဖြစ်ကြောင်းပြသ
Swansea Uni မှသိပ္ပံပညာရှင်များသည်အလွန်အကျွံသုံးစွဲသူများသည်မကြာခဏဖျားနာခြင်းများဖြစ်ပွားလေ့ရှိသဖြင့်အလွန်အကျွံအသုံးပြုခြင်းသည်လူများ၏ကိုယ်ခံအားစနစ်ကိုပျက်စီးစေနိုင်သည်။
အဆိုပါလေ့လာမှုအဟောင်း 500 နှစ် 18 လူတွေကိုအသက် 101 အကဲဖြတ်။ ဒါဟာ Over-သုံးပြီးအင်တာနက်နှင့်အတူပြဿနာများသတင်းပို့သောသူတို့အားလည်းအင်တာနက်ကိုအလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်းသတင်းပို့မပြုခဲ့တဲ့သူတွေကိုလူတွေထက်ပိုမိုအအေးမိခြင်းနှင့်တုပ်ကွေးရောဂါလက္ခဏာရှိခြင်းအစီရင်ခံကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းအကြားကွဲပြားဘူးသောကိန်းဂဏန်း - နမူနာများ 40% ဝန်းကျင်အင်တာနက်စွဲလမ်း၏ပျော့သို့မဟုတ်ပိုဆိုးအဆင့်ဆင့်သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ အင်တာနက်စွဲလမ်းပိုမိုအဆင့်ဆင့်နှင့်အတူပြည်သူ့လျော့နည်းပြဿနာအင်တာနက်အသုံးပြုမှုနှင့်အတူများထက်န်းကျင် 30% ပိုမိုအအေးမိခြင်းနှင့်တုပ်ကွေးရောဂါလက္ခဏာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။
Related: အင်တာနက်စွဲစိတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်, ဝလေပညာရှင်တွေပြောပါ: အကယ်. သင်သည်စွဲပါသလား?
ဒါဟာအစအင်တာနက်အတွေ့အကြုံအပေါ်တစ်ဦးတည်းအချိန်ကြာမြင့်စွာသုံးစွဲတဲ့သူတွေကိုရိုးရှင်းစွာအခြားသူတွေနဲ့သူတို့ရဲ့ပိုးမွှားတွေနဲ့အလုံအလောအဆက်အသွယ်ရှိခြင်းမဟုတ်၏ရလဒ်အဖြစ်ကိုယ်ခံစွမ်းအား function ကိုလျှော့ချသည်ဟုဖြစ်နိုင်သည်။
- ပါမောက္ခဖီးလ်ရိဒ်, ဆွမ်ဆီးတက္ကသိုလ်
2013 မှာတော့အဖွဲ့ကိုလည်းအလွန်အကျွံကြာရှည်စွာများအတွက်အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုဖို့သူအလူငယ်များ၏ပစ္စည်းဥစ္စာ mis-အသုံးပြုသူများအလားတူဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေခံရနိုင်သည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ဆက်ဖတ်ရန် - သာမာန်မိဘများသည်စမတ်ဖုန်းကိုတစ်နေ့လျှင် ၂၄၀ ကြိမ်အသုံးပြုသည်။
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ် Thu6သြဂုတ် 2015